Ma waxaad tahay Dutchtown Faan • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Ma waxaad tahay Dutchtown Faan
Dalbo Dutchtown Faan calaamad halkan:
Ku soo dhowow Dutchtown, oo ah xaafad culeyskeedu yahay sooyaalkeenna magaaladeenna isla markaana u taagan runta cidda aan maanta nahay. Waxaan nahay St. Louis xaafada ugu dadka badan uguna cufan. Waxaan nahay xaafad soo martay koritaan, foosha, iyo koriin markale. Waxaan nahay Dutchtown Faan.
Dutchtown Faan video by Chip Smith ee Isgoyska Grand.
Qaarkeen baa waligood joogay Dutchtown. In ka badan boqol sano ka hor, qoysaskeennu waxay dhisteen dhismayaal bulukeeti ah, kaniisado, iyo waddooyin kuwaas oo u babac-dhigay tijaabada waqtiga koonfurta St. Waxaan aragnay asxaabta qaar oo ka fogaanaya, waxaan aragnay meheradaha oo imanaya oo tagaya, waxaan aragnay wajiyada deriskeena oo isbadalay. Meel kale kuma noolaan lahayn.
Qaarkeen baa u guuray Dutchtown fursado cusub. Waxaa laga yaabaa inaan dhaqaale ahaan ku barakacnay ama si fudud aan u nimid raadinta guryo la awoodi karo. Joogitaankeena dejiyey dadka reer Dutchtown waxayna u abuurtay bulsho weyn dadka mustaqbalka degan. Midnimadu waa bulshada ugu fiican.
Qaarkeen waa soo galooti. Waxaan ka nimid adduunka oo dhan waxaanan joognay 25 sano ama maalin uun. Sida soo-galootiga ugu horreeyay ee Dutchtown, waxaan keenay dhadhan cusub, dhar, caadooyin, iyo qaabab nololeed oo lagu abuuro xaafad firfircoon.
Dhamaanteen waa Dutchtown Faan. Ku faan inaad ka mid noqotid mid ka mid ah xaafadaha ugu kala duwan, qaddarinta badan, iyo fikirka hore ee St. Ku faan hanashada barwaaqada halkan. Ku faani inaad u sheegto kuwa ka shakisan sababta aan ugu yeerno Dutchtown home.
Waxaan ugu yeernaa guriga Dutchtown xulasho ahaan. Waxaan dooranay inaan isu nimaadno oo aan jaaliyad ka dhisno deriska kuwaas oo laga yaabo inaysan u muuqan ama ku noolaan noloshooda si isku mid ah. Waan ixtiraamaynaa deriskayaga xaqqa ay u leeyihiin inay doortaan Dutchtown, iyadoon loo eegin cidda ay yihiin, cidda ay jecel yihiin, sida ay u eg yihiin, waxa ay nolol ku qabtaan, ama duruufaha halkaan keenay.
Haddii aad rabto inaad nagu soo biirto waan ku faraxsanahay inaan ku helno. Laakiin waa in laga digtoonaado: Waxaan ku baraarugsanahay taariikhdeena waana ka daalnay inaan labo jeer isla khaladaad isku mid ah galno. Waxaan ka fogaaneynaa mala-awaalayaasha, kuwa sida dhaqsaha ah wax u hagaajiya, ama kuwa ka xun, qof kasta oo aan dooneyn inuu isku duubnaado deriskiisa oo uu qaato isbadalka.
Wadadeena hore waa mid caadi ah oo waxaan aragnaa inay nagu sii fidsan tahay mustaqbalka fog. Marka isku soo duub gacmahaaga oo xubin ka noqo Dutchtown Faan maaddaama aan aqoonsanno waayiheennii hore, aan u dabaaldegno waxa aan hadda joogno, isla markaana aan u diyaarinno mustaqbalkeenna wadajir.
Ma dooneysaa inaad muujiso hankaaga Dutchtown? Dalbo adiga Dutchtown Faan calaamadda ardaaga maanta. Sheeg qiimahaaga.
Filimka hoos Dutchtown. Muuji dhamaan qeybaha. Dutchtown iyo Sawir. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay July 1st, 2020 .
DutchtownSTL.org Dutchtown Ma waxaad tahay Dutchtown Faan